yoo jijjiiruun CreateUnoValue gara akaakuu Uno adda baafameetti hin danda'amne, dogoggorri ni dhalata. tajaajila jijjiirraf TypeConverter ni fayyada.
Faankishiniin kun ni fayyada jedhame kan yaadamee yoo haalli jijjiiruu durtii Basic gara akaakuu Uno ttii gahaa ta'uu baate dha. Haalli kun dhalachuu kan danda'u yeroo ati walquunnama generic any irratti hundaa'e kan akka XPropertySet::setPropertyValue( Name, Value ) or X???Container::insertBy???( ???, Value ), from LibreOffice Basic dha. Sababa tajaajila walgitaa qofa keessatti ibsamaniif, Basic runtime akaaku akkanaa beekuu hin danda'u.
Haala akkanaa irratti , LibreOffice Basic akaakuu walitti firoomsi gaarii kan Basic type ati jijjiruu barbaaddu filata. Haa ta'u malee, yoo akaakuun hin taane filatame,dogoggorri ni dhalata.Gatii akaakuu Uno hin beekamne uumuuf faankishinii CreateUnoValue() tti fayyadami.
Gatiiwwan non-Any dabarsuufis itti fayyadamuu ni dandeessa, garuu hin gorfamu.yoo Basic durseetoo gosa galtee ni beeka ta'e, faankishinii CreateUnoValue() fayyadamuun dalagaalee jijjirraa dabalataa kan raawwii Basic suuta gochisiisu fida.